Mobile APPeal - Sahaminta Muuqaalka Muuqaalka Wareegtada | Martech Zone
Barnaamijyo casriyeysan oo ka badan kuwa dhallaanka ah? Wax ku saabsan taasi waxay umuuqataa wax yar oo cabsi leh… oo aad u fiican isla waqtigaas. Dib-u-eegista muuqaalka dalabyada, waxaa muuqata inay jiraan tanno ciyaaro ah, laakiin barnaamijyada wax soosaarka ganacsiga ayaa gadaal u socda. Waan hubaa inaad arki doontid lambarradan oo si dhow isugu soo dhowaanaya mustaqbalka, in kastoo, in badan oo shirkadaha shirkaduhu ay qaataan istaraatiijiyado moobayl ah qayb ka mid ah maalintooda ganacsi.
Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in taleefannada casriga ah iyo aaladaha kale ee moobiilku ay gaareen heer meel walba la joogo. Waxaan u isticmaalnaa iyaga maalin kasta, wax kasta oo ka mid ah sameynta hoteel, illaa aan ka hubinno xisaabaadkayaga bangiga, dalbanno pizza iyo in ka badan. Iyo in ka badan 1.5 milyan oo barnaamijyo ah oo laga heli karo Apple App Store iyo Google Play, macaamiisha waxay leeyihiin qaddar aan xadidnayn oo ikhtiyaarro ah oo ay ka kala doortaan. Laga soo bilaabo infographic New reelic, Mobile APPeal: Waa maxay sababta Mustaqbalku u yahay Mobil.
Tags: infographicapp mobileracfaanka wareegaNew Relic
Suuq-geynta Gudaha ee Ganacsiga Yar